Fashion – Page2– OOTDMYANMAR
7 CUTE INSTAGRAM POSES TO TRY, AS SEEN ON M SENG LU
No Comments on7CUTE INSTAGRAM POSES TO TRY, AS SEEN ON M SENG LU
M Seng Lu ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Instagram Pose ၇ မျိုး
M Seng Lu already proved her minimal, sporty and sexy style! Her style isn’t loud, but it’s impact is very boombastic! She really knows how to look great in her photos. Check out below how you can get inspired with her cute poses below:
M Seng Lu က သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့စတိုင်၊ ရိုးရှင်းတဲ့ minimal စတိုင်တွေ၊ sporty စတိုင်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးဘဲ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်း ဘယ်လိုလှအောင်ပို့စ်ပေးရမည်ဆိုတာကိုလည်း သေချာသိတဲ့သူပါ။
Holdadrink and smile. (သောက်စရာခွက်တစ်ခွက် ကိုင်ထားပြီး အလှဆုံးပြုံးပါ။)
Photo Credits via @msenglu
Cross legs and hands on your waist. (ချေခြိတ်ထိုင်ပြီး ခါးထောက်ထားပါ။)
Pocket full of sunshine. (အိပ်ကပ်ထဲလက်ထည့်ပါ။)
Hypebae sitting post. (စမတ်ကျကျထိုင်ပါ။ )
Put your hands agains the walls. (လက်ကို နံရံပေါ်တင်ထားပါ။ )
Sit in style. (စတိုင်ကျကျထိုင်ပါ။ )
Hats off. (ဦးထုပ်ချွတ်ထားပါ။)
Tags msenglu, ootdmyanmar, poses
4 ADORABLE OUTFITS OF WUTT HMONE SHWE YI FEATURING BUCKET HATS
No Comments on4ADORABLE OUTFITS OF WUTT HMONE SHWE YI FEATURING BUCKET HATS
Bucket hats first emerged in 1900 for Irish farmers and fishermen as rain protection. It reemerged in the late ’80s on rappers like LL Cool J, who made itafashion essential ’90s hip-hop and street style scenes. And since the ’90s are back again, and so the bucket hats.
Bucket ဦးထုတ်တွေက ၁၉၀၀ ခုနှစ်မှာ အိုင်းရစ်လယ်သမားတွေနဲ့ငါးဖမ်းသမားတွေ မိုးဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့အသုံးပြုရာကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ ၈၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ LL Cool J တို့လို rapper တွေကနေစတင်ပြီး Bucket ဦးထုပ်တွေကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ Bucket ဦးထုပ်တွေက ၉၀ ခုနှစ်ရဲ့ hip hop နဲ့ street style တွေမှာ မပါမဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ၉၀ ခုနှစ်ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့အတူ Bucket ဦးထုပ်တွေကလည်း တစ်ကျော့ပြန်ခေတ်စားလာပါပြီ။
Below are adorable ways to style your bucket hats according to Wutt Hmone Shwe Yi
ဒါကြောင့် ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ Bucket ဦးထုပ်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Girly Tone Pair it withapastel colors to balance the girly and boyish vibe.
မိန်းကလေးဆန်ဆန် – ယောကျ်ားလေးဆန်တဲ့အသွင်အပြင်ကို အရောင်ဖျော့လေးတွေနဲ့တွဲစပ်ပြီး
#2 Comy Fever A lazy but not so lazy OOTD — Swater and tote bags.
သက်သောင့်သက်သာ – ပျင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုရုံလေးဖြစ်စေမယ့် OOTD – ဆွယ်တာ နဲ့ tote bag
#3 90s girl Pair it withaflare denims, crop top, white sneakers andadesigner bag.
90 ခုနှစ်မိန်းမပျိုလေးစတိုင် – ဖလဲဂျင်း၊ crop top ၊ sneaker အဖြူ နဲ့ designer bag ကိုတွဲဖက်ပါ။
#4 Denim Pretty A Denim dress, sunnies and sneakers would do it!
ဂျင်း – ဂျင်းဂါဝန်၊ နေကာမျက်မှန် နဲ့ sneaker ကလည်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။
Tags bucket, ootdmyanmar, wutthmoneshweyi
11 CHARMING AND COMFY OUTFITS TO WEAR WITH SNEAKERS ACCORDING TO PIPPA CAMERON
No Comments on 11 CHARMING AND COMFY OUTFITS TO WEAR WITH SNEAKERS ACCORDING TO PIPPA CAMERON
Pippa Cameron လို Sneaker နဲ့ တွဝတ်နိုင်မယ့် စတိုင်ကျပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ ဝတ်စုံ ၁၁ မျိုး
If you didn’t notice, Pippa has been inspiring us with great OOTDs featuring the comfy yet trendy footwear —— SNEAKERS! Her outfits with her sneakers are OOTD inspos you’ll want to copy when you’re #stayingathome, doing errands like going to the grocery but still looking fashionably charming!
အားလုံးသတိမထားမိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Pippa က သူမရဲ့အမိုက်စား OOTD တွေကို သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး လူကြိုက်များခေတ်စားနေတဲ့ Sneaker တွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပြီး ဖက်ရှင်နဲ့ပက်သက်တဲ့အတုယူစရာတွေ အများကြီးဝေမျှပေးနေပါတယ်။ Sneaker နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေက အခုလိုကာလမှာ အိမ်မှာနေရင်းလိုက်ဝတ်လို့ရသလို၊ ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် အပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း စတိုင်ကျတဲ့အမြင်မျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
Below are 11 charming sneaker OOTDs you’ll want to cop from Pippa Cameron.
အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Pippa Cameron ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ sneaker နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံ 11 မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
#1 Cycling shorts + belt + coat (ဘောင်းဘီတို + ခါးပတ် + ကုတ်အင်္ကျီ)
Photo Credits via@ pippa.cameron_
#2 Nude dress + baguette bag (အသားရောင်ဝတ်စုံ + ဘားကတ်အိတ်)
#3 Denims + Logo tee+ layered necklace (ဂျင်း + လိုဂိုတီရှပ် + ဆွဲကြိုး)
Photo Credits via@ pippa.cameron_ Necklace from @pla_jewelery
#4 Tulle dress + headband (အထပ်ထပ်ဝတ်ဂါဝန် + ခေါင်းစည်း)
#5 Flared denims + Apple Watch (ဖလဲဂျင်း + Apple နာရီ)
#6 Oversized tee + denim mini shorts (တီရှပ်အပွ + မီနီဂျင်း )
#7 Sunnies + neon beanie+ logo belt (နေကာမျက်မှန် + နီယွန်ဦးထုပ် + လိုဂိုခါးပတ်)
#8 Blue Dress (အပြာရောင်ဂါဝန်)
#9 Neon hoodies + hoop earrings (နီယွန်ခေါင်းစွပ်အနွေးထည် + နားကွင်း)
#10 Tanktop + cheerleader skirt (လက်ပြတ်အင်္ကျီ + စကတ်အတို)
#11 Myanmar Longyi (မြန်မာလုံချည်)
Tags ootdmyanmar, sneakers
5 LAIDBACK DENIM SKIRT OUTFIT IDEAS YOU CAN COMFORTABLY WEAR AT HOME
No Comments on5LAIDBACK DENIM SKIRT OUTFIT IDEAS YOU CAN COMFORTABLY WEAR AT HOME
အိမ်မှာနေရင်းဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ဂျင်းစကတ် ၅ မျိုး
When choosing your stay- at-home ootd, it is so important to prioritize comfort over anything else. But comfortable clothes don’t always have to mean oversized tees, pyjamas, shorts.
stay- at-home ကာလအတွင်းမှာ ဝတ်စုံရွေးချယ်တဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာရှိဖို့က အခြားအရာတွေထက် အဓိကဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သက်သောင့်သက်သာရှိတယ်လို့ပြောတိုင်း တီရှပ်အပွတွေ၊ ညအိပ်ဝတ်စုံတွေ၊ ဘောင်းဘီတို၊ စတတ်တိုလေးတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
Just check out below some stylish and laidback denim skirt outfits you can pull off:
ဒါကြောင့် ဂျင်းစကတ်နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိမယ့်ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Mini Skirt Denim Skirt + Knitted Top (မီနီဂျင်းစကပ် + ဆွယ်တာ)
Photo via @mdsmyanmar
#2 Puffy Sleeves + Mini Skirt Buttoned skirt
လက်အပွအင်္ကျီ + ကြယ်သီးပါတဲ့မီနီစကပ်
#3 Tattered Skirt + Off Shoulder Top (အမွှားလေးတွေပါတဲ့စကပ် + ပုခုံးကျအင်္ကျီ)
#4 Maxi Denim Skirt + Spaghetti strap top (ဂျင်းစကပ်အရှည် + ကြိုးတစ်ချောင်းအင်္ကျီ)
#5 Back Denim Skirt + nude top (ဂျင်းစကပ် + အရောင်နုအင်္ကျီ)
Want to purchase off these outfits? Shop these stylish pieces from MDSMYANMAR
ဒီဝတ်စုံလေးတွေကို သဘောကျလို့ ဝယ်ချင်သွားပြီလား။ စတိုင်ကျတဲ့ ဝတ်စုံလေးတွေကို MDSMYANMAR ရဲ့ https://rb.gy/dxlbqs မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
PS. They have another Live Sale this Sunday.
Live Sales ပြန်စပြီဆိုတာနဲ့ အရမ်းအားပေးကြတဲ့ mds သဲတုံးတို့ကို ချစ်လိုက်တာ
ဒါကြောင့် လာမယ့် Sunday (18.10.2020) နေ့လည် ၂နာရီမှာလည်း ဒီဇိုင်းသစ်အမိုက်စားတွေကို ❗29,000 Ks❗ ကစပြီးလျော့ဈေးတွေနဲ့ရောင်းပေးဦးမယ်.
Tags denims, denimskirt, mdsmyanmar, ootdmyanmar
WHY I LOVE MDS MYANMAR?
1 Comment on WHY I LOVE MDS MYANMAR?
MDS Myanmar ကို ဘာကြောင့်ချစ်တာလဲ
MDS Myanmar is one of the loved fashion brands in Myanmar. Combining its feminine aura with functionality. MDS Myanmar never fails to makeastatement. So we’ve asked some of our lovely followers on why they love MDS Myanmar. Here are their answers:
MDS Myanmar ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးဆန်တဲ့အငွေ့အသက်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အသွေးတွေကို ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် OOTD က ချစ်ရတဲ့ follower တချို့ကို MDS Myanmar ကို ဘာကြောင့်ချစ်ရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ မေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့အဖြေတွေပါ။
a. Khaing Myat Thazin @km_thazin
“I love MDS Myanmar because it’s comfortable to wear, the designs are simple and beautiful, and lastly it may bealittle expensive because it hasahigh quality”
“ MDS Myanmar က ဝတ်ရတာသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းတွေက ရိုးရှင်းပြီး လှပတဲ့အတွက် သဘောကျပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့အတွက် ဈေးလည်းနည်းနည်းကြီးပါလိမ့်မယ်။”
b. Khaing Zin, @kz_htun
“I love MDS Myanmar because I can know what’s trending in fashion. MDS Myanmar is also comfortable and beautiful. So, I usually wear this brand whenever I go out. I’lll keep buying from them and besides it’s easier to shop because they collaborated with shop.com.mm”
လတ်တလောခေတ်စားနေတဲ့ဖက်ရှင်တွေကိုသိနိုင်လို့ MDS Myanmar ကို သဘောကျပါတယ်။ MDS Myanmar က ဝတ်ရတာသက်သောင့်သက်သာရှိပြီး လှလည်းလှတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အပြင်သွားတိုင်း ဒီတံဆိပ်ကိုပဲဝတ်ဖြစ်တယ်။ ဆက်ပြီးလည်းအားပေးနေဦးမှာပါ။ ပြီးတော့ အခုဆို shop.com.mm နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ ဝယ်ရတာပိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။”
“I love MDS Myanmar because their designs are so unique. I also love that the cutting of the clothes are almost perfect for every body shapes. Lastly is, the texture of the clothes are flawless.”
“MDS Myanmar ကို ကြိုက်ရတာက သူ့ဒီဇိုင်းတွေကသီးသန့်ဖြစ်လို့ပါ။ ချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကိုလည်း သဘောကျတယ်။ သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေက ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်တယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် အဝတ်အစားတွေမှာသုံးထားတဲ့ ပိတ်စတွေ၊ အဆင်တွေကလည်း တစ်ကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံပါတယ်။”